Takelaka akrilika miloko Mpanamboatra sy mpamatsy - orinasa vita amin'ny acrylic miloko China
1) Famindrana avo hatramin'ny 93%;
2) Mavesatra maivana: latsaka ny antsasaky ny lanjan'ny vera;
3) fanoherana ny toetr'andro tsara manohitra ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fiovana;
Ravina akrilika 4mm ho an'ny lakozia
Taratasy akrilika dia thermoplastic mahazaka maivana sy marefo. Ny fitaovana dia mety amin'ny fampiharana marobe toy ny tranga miseho, famolavolana sary, fisehoan'ny fividianana, fanaka, signage, fizara tsiambaratelo ary maro hafa.
ravina acrylic iridescent
Ny takelaka acrylic dia azo atolotra amin'ny Clear, Black, White, Gray, Bronze, Blue, Red, Yellow, Green ary maro hafa. Afaka tapaka laser izany.
Black Cast Acrylic Sheet dia fitaovana plastika mainty misy tanjaka miavaka, hamafiny ary mazava tsara amin'ny optika. Ny taratasy akrilika dia mampiseho toetra toy ny fitaratra — mazava, famirapiratana ary mangarahara — fa amin'ny antsasaky ny lanjany ary imbetsaka ny fiatrehana ny fitaratra.
Takelaka akrilika miloko. Raha teôria dia misy loko azo atao. Ny lokon'ny acrylic mahazatra eny an-tsena dia mizara roa karazana: acrylic mangarahara ravin sy acrylic loko miloko. Ny takelaka akrilika mazava dia misy takelaka mangarahara madio sy ravina acrylic matevina;